Bukela amavidiyo we-YouTube avinjiwe - Izindlela Zokusebenza (2020) - Ungakwenza Kanjani
I-YouTube ingenye yezingxenyekazi ezinkulu zokwabelana ngamavidiyo. Ingxenye engcono kakhulu mayelana nensizakalo ukuthi ikhululekile ukusebenzisa i-100%. Noma ngubani angasebenzisa insizakalo yakhe. Sincoma ukuthi wonke umuntu kufanele azame okungenani kanye. Kunamavidiyo amaningi angavinjelwa kuwebhusayithi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zemikhawulo eyenzeka kusayithi lonkana. Wonke umuntu ufuna ukubuka amanye amavidiyo wokuzijabulisa nsuku zonke.
Sizobheka ukuthi ungawabuka kanjani amavidiyo we-youtube avinjiwe ngalo mhlahlandlela. Inhloso yethu ukuxoxa ngezindlela eziningi zokusebenza. Lokhu kuzosebenzela wonke umuntu emhlabeni jikelele.
Izindlela ezihamba phambili zokubuka amavidiyo we-YouTube avinjelwe:
Kulesi sigaba, sizoxoxa ngezindlela ezinhle kakhulu zokwenza i-Youtube isebenze noma kuphi. Ungabuka okuqukethwe kwe-premium ngaphandle kokukhathazeka. Lezi zikhethi eziphezulu zivivinywa.
Ochwepheshe bethu basebenzise isikhathi esiningi basebenza ekucwaningeni. Izixazululo zingubufakazi obugcwele. Zama ukusebenzela lokhu esimisweni sakho sansuku zonke. Landela imiyalo ukuqala ukubuka khona manjalo.
Ingenye yezindlela eziqonde kakhulu. Ukukhiya okuningi kwesifunda kuyenzeka ngenxa yaleli qhinga elilula.Ungasebenzisa lo mthombo ukushintsha ukukhiya kwakho. Ividiyo evinjiwe ye-youtube izoqala ukusebenza esikhathini esithile. Sincoma ukuthi usebenzise le ndlela elula ukuqala ukubuka.
Isinyathelo sokuqala ukuthola noma iyiphi ividiyo oyithandayo. Abasebenzisi bangavakashela iwebhusayithi ye-Youtube futhi bafune ividiyo abayithandayo. Kufanele ukopishe isixhumanisi kule vidiyo.
Isinyathelo sesibili ukwenza ukuhlela okuncane kusixhumanisi. Isixhumanisi sokuqala sizobukeka kanjena - https://www.youtube.com/watch?v=6udJqygTuTo . Kufanele ufake enye i- “watch? V =” esikhundleni se- “/ v /.” Kuzoba-ke https://www.youtube.com/v/6udJqygTuTo .
Ingasebenza ngamavidiyo amaningi. Kwesinye isikhathi ungathola futhi umyalezo wephutha.
IHooktube iyiwebhusayithi edumile enikezela ngohlobo olulula lwe-youtube kubabukeli. Ungabuka noma iyiphi ividiyo ngale pulatifomu. Kwenza inqubo yokuvula amavidiyo ibe lula.
Isayithi libonisa isixhumanisi sakho sevidiyo. Kulula ukuyisebenzisa futhi iwela ngaphansi kwendlela yokuhlela yokuxhumanisa. Ungalandela izinyathelo ezifanayo ngezinguquko ezimbalwa. Abasebenzisi kufanele bangeze isixhumanisi seHooktube esikhundleni se-Youtube.
Ngokwesibonelo - https://www.youtube.com/watch?v=H9p4-pzoz-Y uku https://hooktube.com/watch?v=H9p4-pzoz-Y .
Iyasiza futhi ayithathi isikhathi esiningi. Abasebenzisi bangalanda futhi amavidiyo we-youtube ngalesi sixhumanisi esihle.Sincoma ukuthi uzame namuhla. Izovulela khona manjalo wonke amavidiyo wesifunda sakho akhiyiwe.I-interface yomsebenzisi ilula impela. Akufanele ube nezinkinga ngenkathi usebenzisa le sevisi.
Izinhlelo ezihlukile ze-YouTube:
Ipulatifomu ye-YouTube ithandwa kakhulu phakathi kwabantu. Abasebenzisi abaningi basebenzisa ipulatifomu ngezidingo zabo zokuzijabulisa zevidiyo. Abathuthukisi abaningi bezinhlelo zokusebenza bazama ukwenza inzuzo ngokuthandwa kwayo. Ungabona kunezindlela eziningi ze-Youtube. Lezi zinhlelo zisebenzisa amavidiyo we-YouTube afanayo kusimo esihlukile. Lokhu kungasiza kakhulu ekuxazululeni inkinga evinjiwe yevidiyo ye-youtube. Abasebenzisi abaningi ku-intanethi basebenzisa lokhu kuma-Smartphones abo. Okuwukuphela kwento ebuyayo ukuthi le ndlela iyatholakala kubasebenzisi be-Android ne-iOS.
I-NewPipe uhlelo lokusebenza lwakamuva olusiza abasebenzisi be-Android ukusakaza amavidiyo we-youtube kalula. Inganciphisa inani lamavidiyo avinjiwe ozobhekana nawo. Inqubo ephelele yokusebenzisa le nsizakalo iyamangaza impela. Kuqala ngenqubo yokuqinisekisa ukuthi uthola okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu ngokushesha. Iwebhusayithi ikhona ukukusiza ngolwazi oludingekayo. Ukulanda okulula akuthathi isikhathi esiningi.
Ungashintsha uhlelo lwe-Youtube kudivayisi yakho. Azikho izikhangiso ezicasulayo kule sevisi noma izingidi zesifunda. Amavidiyo avela nxazonke zomhlaba atholakala kalula. Yizame namuhla ukuze ubone imiphumela esheshayo.
Izinsizakalo ze-VPN zikusiza ukuthi ushintshe indawo yedivayisi yakho. Kuyindlela elula yokonakalisa umhlinzeki wakho wesevisi. Kungavula ngokushesha noma iyiphi ividiyo. Inqubo ilungele abasebenzisi ababhekene nezinkinga zokukhiya kwesifunda. Amavidiyo e-youtube avinjelwe kakhulu noma avinjelwe angasebenzisa le ndlela njengokulungiswa okulula.
Kunamathani amahhala wokusebenzisa amasevisi we-VPN atholakala ku-inthanethi. Sincoma iTurbo VPN yabasebenzisi beselula. Abasebenzisi be-PC bangasebenzisa izandiso zesiphequluli ukufinyelela kalula. I-VPN ethandwa kakhulu kumakhompyutha yi-Hola VPN. Zithandwa kakhulu ngenxa yesevisi esheshayo. Ungashintsha indawo yakho uye kunoma yikuphi emhlabeni jikelele.
Abasebenzisi abaningi bafuna ukuba nesipiliyoni se-premium. Kulabo basebenzisi, sincoma insiza yeNordVPN. Yisevisi ekhokhelwayo eza namathani okuphepha nezici zendawo. Esinye sezici eziyinhloko zalesi software ukukhipha indawo okuyo. Zama ukuyisebenzisa namuhla bese uthola izinzuzo ezinhle.
I-VPN Black Friday - Iziphesheli ezinhle
3. Indlela ye-proxy server
Amaseva wama-proxy ayindlela yokugcina kubasebenzisi abaningi. Kuyindlela eyinkinga esingayincomi. Ezimweni ezimbi kakhulu, ungasebenzisa le nsizakalo. Amaseva we-Proxy akusiza ukufihla indawo okuyona ku-intanethi. Kuzogcina nokuba khona kwakho ku-inthanethi kungaziwa ngokuphelele.
Kuyindlela enhle yokuhlala uphephe ngokuphelele ngenkathi usebenzisa i-inthanethi. Lezi zinsizakalo zivame ukukhokhwa kepha zizosebenza ngokuzikhandla. Olunye lwezinsizakalo zommeleli ezaziwa kakhulu online yiProxfree. Banommeleli wamahhala we-Youtube. Kuzokusiza ukuthi ushintshe indawo okuyo uye noma yikuphi.Ingxenyekazi ikuvumela ukuthi ubuke amavidiyo we-youtube avinjiwe mahhala.
4. Landa amavidiyo we-Youtube
Esinye isisombululo esilula senkinga ukulanda amavidiyo. Izosebenza noma ngabe ividiyo ivinjiwe esifundeni sakho. Kunamathani wezinketho ezitholakalayo zokulanda ividiyo ye-Youtube. Amathuluzi amaningi esoftware aqinisekisa ukuthi abasebenzisi bangasakaza kalula okuqukethwe.
Ilungele ukonga okuqukethwe kukhompyutha yakho. Sincoma abafundi bethu ukuthi bazame isevisi yokulanda i-YTD. Yisevisi endala futhi ebaluleke kunazo zonke. Isoftware ibilokhu isebenza isikhathi eside. Unganamathisela noma yisiphi isixhumanisi kuthuluzi ukulilanda ngokushesha.
Ukubuka amavidiyo we-youtube avinjelwe inqubo elula. Noma ngubani angasebenzisa izindlela esixoxa ngazo kule ndatshana. Sithemba ukuthi izindlela zokuqoqa ziwusizo kuwe. Zama lokhu namuhla bese usazise uma bexazulula inkinga yakho.
ngingawabuka kanjani ama-movie online mahhala ngaphandle kokulanda
thola ukuthola amasayithi we-google angavinjelwe
bukela ama-movie wamahhala we-horror online ngaphandle kokulanda noma ukubhalisa
uyini umehluko phakathi kwama-airpod nama-airpods pro
ingakanani i-akhawunti yomfundi amazon prime